Izakhiwo eziwusizo | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Isigaba Izakhiwo eziwusizo
I-Brazil nut - yini ewusizo
I-Bertoletija iyinhlobo yezitshalo ze-monotypic, ezisakazwa kakhulu eNingizimu Melika. Uhlobo olulodwa lwalolu hlobo luyi-billet ende, eyaziwa kuwo wonke umhlaba ngaphansi kwegama elithi "i-Brazil nut". Izithelo zalesi sitshalo zikhulu ngobukhulu njenge nut. Nakuba ukubiza lo mkhiqizo umuthi awukona ngokuphelele, ngoba ku-botany kubizwa ngokuthi okusanhlamvu.
Indlela i-pistachios ewusizo ngayo
Umuthi wokuphila empeleni ukhona. Lokhu akuyona iphutha elidunyiswa abalobi nabaculi, hhayi isithombe sokuqinisekisa ukuphila okuvela emibhalweni yeBhayibheli, kodwa i-pistachios eyaziwayo. Izinkulungwane zeminyaka lezi zitshalo ezishisayo zinike izitshalo ngezithelo eziyigugu, ezihlanganisa ngokunamnandi ukunambitheka kanye nezakhiwo eziwusizo.
Yini i-Brazil nut ehlanganisa futhi iyasiza abesifazane
Mhlawumbe abaningi bethu bajwayele amantongomane aseBrazil - lo mkhiqizo wokudla utholakala yonke indawo, ngoba uthole ukusetshenziswa kwawo cishe kuzo zonke izindawo zokudla. Ingasetshenziswa yodwa noma ibe yinkampani ephelele ehambisana nazo zonke izinhlobo zezitsha ezisawoti nezomnandi. Kodwa-ke, akubona abantu abaningi abawazi ukuthi, ngaphandle kwezici eziwusizo ze-receptors ukunambitha, le nut inezinqwaba zezinto eziwusizo umzimba wesifazane.